राप्रपाको एकता महाधिवेशन, राजासहितको लोकतन्त्र :: a1nepal.com.np
राप्रपाको एकता महाधिवेशन, राजासहितको लोकतन्त्र
उद्घाटनसत्रमा क-कसले के के भने ?
काठमाण्डौ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपालबीचको एकीकरण पछिको एकता महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । दुई पार्टी एकता पश्चात पार्टी अध्यक्ष भएका कमल थापाले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको प्रस्ताव अघि सार्ने बताए । सदियौंदेखि नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताका पक्षमा रहेको संस्थालाई विस्थापित नै गर्नुभन्दा सही ढंगबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । ‘प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण तथा नेपालको आधुनिकीकरणमा योगदान पु¥याएको संस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, राजासहितको लोकतन्त्र आजको आवश्यकता हो,’ अध्यक्ष थापाले भने ।
अध्यक्ष थापाले राप्रपाले राजासहितको लोकतन्त्रको नीति महाधिवेशनबाट तय गर्नेसमेत उद्घोष गरे । ‘गणतन्त्रवादीहरूलाई म नझस्कन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘राप्रपाले एकता महाधिवेशनबाटै राजासहितको लोकतन्त्रको पक्षमा रहने नीति तय गर्छ ।’
उनले नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्रसहितको नेपाल बनाउने अभियानमा समेत एकता महाधिवेशनले महत्वपूर्ण निर्णय लिने बताए । थापाले तत्कालीन राप्रपा नेपालको आलोचनात्मक समर्थन भए पनि संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गरेको भन्दै संविधानमा आफ्नो पनि स्वामित्व रहेको तथा संविधानमा धेरै कमजोरी रहेको औंल्याए ।
उनले प्रमुख दलहरूले संविधान निर्माण गर्दाकै बखत संशोधन गर्ने वाचा गरेको भन्दै त्यो पूरा नगरे बेइमानी हुने जिकिरसमेत गरे । थापाले कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय नहुने भन्दै परिमार्जन गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । तर, अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितविपरीत भएकाले समर्थन गर्न नसक्ने उनको धारणा थियो । सरकारले चुनाव घोषणा गरे समर्थन गर्ने पहिलो दल राप्रपा हुने भन्दै उनले मधेसका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपाले विमति र असहमतिका बाबजुद संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि सकारात्मक सहयोग गर्ने अपेक्षा आफूले लिएको बताए ।
‘देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा जान नदिन संविधान निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन निर्विकल्प छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले केही दिनमा नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको र संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि सँगै अगाडि बढाइने बताए । ‘सरकार केही दिनभित्रैमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ, संविधान संशोधन पनि सँगै अगाडि बढ्छ, राप्रपालाई यो प्रक्रियामा पनि साथ दिन आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुक अत्यन्तै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले तीनै तहको निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले मधेसी जनताको भावनालार्ई सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएकाले राप्रपाले पनि सो प्रस्तावमा सहयोग गर्ने विश्वास
व्यक्त गरे । ओलीले घुमाउरो भाषामा राप्रपालाई लोकतन्त्रको पक्षमा खुलेर आउन आग्रह गरे । एउटा पुस्ताले योगदान गर्यो भन्दैमा सिंगो पुस्तालाई नै मान्न नसकिने भन्दै राजतन्त्रको एजेन्डा नबोक्न पनि राप्रपालाई उनले सुझाए ।‘गौरवपूर्ण इतिहास बोक्नुपर्छ, जे पनि होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई मानियो भन्दैमा तिनका सन्तान र पुस्तौंपुस्तालाई मान्न सकिँदैन ।’
अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन विधेयक देशको हित र जनताको भावनाविपरीत भएकाले कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ४६ सालपछि मुलुकको राजनीति हाक्ने पार्टीहरूको कमजोर दृढताका कारण मुलुकको दुरवस्था भएको बताए । उनले तीन ठूला पार्टीले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सबैको सहमतिबाट मात्रै निकास खोज्न सकिने धारणा राखे ।
तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले केही राजनीतिक दलहरूले मधेसी जनताको देशभक्तिमाथि प्रश्न चिह्न उठाएर अपराध मनोवृत्ति देखाएको आरोप लगाए । उनले संविधान संशोधन नगरिए २०४७ कै संविधानको जस्तै वर्तमान संविधानको पनि हविगत हुने जिकिर गरे ।
राप्रपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ठूला दलहरूको भागबन्डाको राजनीतिले देशलाई झनै संकटमा पारेको बताए । उनले राप्रपा अब कुनै गुट र व्यक्तिको पार्टी नभएर जनताको पार्टी हुने दाबी गरे ।
राप्रपा नेता पशुपतिशमशेर राणाले इतिहासमा मानिस र पार्टीलाई एक पटक मात्र अवसर आउने बताउँदै त्यो अवसर अहिले राप्रपालाई आएको बताए । उनले पार्टी नेतृत्वका विषयमा सर्वसहमतिको प्रयास जारी रहेकाले महाधिवेशन उद्घाटनले शक्ति प्रदान गरेको बताए ।
अर्का नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सबैले एक एक कदम पछि हटे मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले पार्टीको महाधिवेशनले वर्तमान राजनीतिक समस्याको निकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गरे ।
राप्रपाको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुन आएका थिए । महाधिवेशन उद्घाटन सकिएसँगै बन्दसत्र सुरु भएको थियो ।
महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । राप्रपामा अध्यक्षसहित २४ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । कार्यसमितिमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ता रहनेछन् । तर, अध्यक्षबाहेक अरू मनोनीत हुने व्यवस्था छ । सदस्यहरू ६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० प्रतिशत मनोनीत हुनेछन् । त्यसमध्येबाट नै पदाधिकारी छनोट हुने व्यवस्था रहेको छ । राप्रपामा १ सय ६१ जनाको कार्यसमिति रहनेछ ।
महाधिवेशनमा स्वदेश तथा प्रवास समितिहरुबाट समेत गरी ३ हजार ३ सय १५ प्रतिनिधि सहभागी छन् । महाधिवेशनमा मूलभूत रूपमा विधान संशोधन, राजनीतिक कार्यपत्र र आर्थिक कार्यपत्रका विषयमा छलफल हुने राप्रपा प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विषय, राप्रपाको भूमिका तथा अन्य दलहरूसँगको राप्रपाको सम्बन्धको विषयमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
२०७५ सालको सार्वजनिक बिदाको तालिका भोलि साँझ चन्द्रग्रहण, विहान ९ बजेपछि खान र सुत्न पनि नमिल्ने प्रदेश राजधानी तोकिएसंगै कतै दीपावली कतै आन्दोलन निर्वाचन प्रचारप्रसारमा टोपी, टी–शर्ट, गम्छा उत्पादन, प्रयोग र प्रदर्शन गर्न निषेध सरकारी सहयोगबिना ६६ विद्यालय भवन बने, कसरी जुट्यो करोडौं रुपैंयाँ सहयोग ? श्रीमतीलाई वियोगान्त पत्र लेखी नारायणी नदीमा हामफाले ३१ बर्षिय तिलक प्रसाद खुकुरी हानेर युवकले गरे आफ्नै बाबुको हत्या शिक्षकले सामान्य कुरामै दिन्छन् कानको जालीदेखि आँखा फुटाउनेसम्म सजाय नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकोलागि माओवादी केन्द्रले पहल गर्ने
← Ambassador Yaron Mayer in POWERchat with Laxman D. Pant	ट्रम्पद्धारा अमेरिकाले लिदै आएको दुई–राष्ट्र नीति फिर्ता →